Fihetseham-po voalohany amin'ny takelaka Amazon Fire HD 8 | Androidsis
Amazon nanavao ny andiany takelaka Fire miaraka amin'ny HD 8 vaovao, fitaovana iray lasa iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny trano sy ny fianakaviana. Takelaka tonga lafatra zaraina amin'ireo mpikambana rehetra izay matetika mandany fotoana isan'andro ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mba hilalaovana karazana atiny multimedia avy ao.
Sarotra ny mahita vokatra amin'ny vidin'ny Fire HD 8, noho ny fandanjana ireo singa ahafahana mahazo azy io € 109,99 ho an'ny kinova 16GB. Fitaovana manome fahatsapana tena tsara hanana efijery IPS LC 8-inch, mpandahateny stereo, puce quad-core MediaTek quad-core ary RAM 1 GB. Mety hisy hilaza fa manana RAM kely izy, saingy ampy ny mihodina amin'ny takelaka misy endri-javatra mahaliana kokoa.
1 Ny takelaka tsara indrindra amin'ny sandan'ny vola
1.1 Famaritana Amazon Fire HD 8
2 Takelaka misy safidy
Ny takelaka tsara indrindra amin'ny sandan'ny vola
Raha mitady takelaka vaovao ianao hanavaozana ilay anananao ho an'ny tranonao ary matetika ampiasain'ny fianakaviana, dia saika lavorary ny tolo-kevitr'i Amazon. Ankoatr'izay dia miresaka momba ny fitaovana iray izay ananantsika magazay Amazon tafiditra amin'izay rehetra tafiditra ao. Any Etazonia dia amidy toy ny donut izy ireo, satria efa mahazatra ny mividy saika ny zava-drehetra avy any Amazon, ka maro ny Amerikanina no mividy takelaka Fire ho an'ny fanamorana ny fananana ny fivarotana an-tserasera.
Ary tsy izany ihany, fa mety tsara amin'ny filalaovana atiny multimedia rehetra toy ny horonan-tsary, andian-tantara, lalao na boky. Ny zavatra mahaliana indrindra amin'ny rehetra dia, na dia manana RAM 1 GB sy a Chip Mediatek 4-core, mandeha tsara ny takelaka. Na dia amin'ny lalao video toa an'i Dan the Man aza, izay mazàna taraiky amin'ny fotoana sasany amin'ny fitaovana hafa, tonga lafatra ny traikefa filalaovana.
Amazon dia nahavita namely ny lakileny havanana tamin'ny vokatra iray novidiny ka saika lasa fakam-panahy. Ilay mpivarotra goavambe dia liana amin'ny fanolorana fomba iray hampiasain'ny mpampiasa afaka mividy ao amin'ny fivarotanao, antony iray hafa mahatonga ny vidiny mora toy izany ho an'ny takelaka izay mety ho lafo kokoa raha refesintsika ny zava-bitany.
Famaritana Amazon Fire HD 8
8-inch HD (1280 x 800) fisehoana vahaolana avo lenta miaraka amin'ny 189ppi
1,3 GHz Chip Quad-core
Fahatsiarovana RAM 1,5 GB
16/32 GB fitehirizana anatiny miaraka amin'ny safidy hanitarana azy hatramin'ny 200 GB amin'ny alàlan'ny micro SD
Fiainana batterie 4,750 mAh hatramin'ny 12 ora rehefa ampiasaina mifangaro
Fakan-tsary 2 MP aoriana
Dolby Audio ho an'ny mpandahateny stereo
Milanja 341 grama
Amazon Underground ho an'ny lalao video premium maimaim-poana
Takelaka misy safidy
Ny sembana tokana ananan'ny takelaka Fire HD 8 dia ny famahana ny efijery, satria raha Full HD izy io dia mety ho fitaovana tonga lafatra. Fa ara-dalàna ny hitrangan'izany, satria € 109,99 dia tsy afaka mangataka bebe kokoa ianao. Misy koa a feo tena tsara miaraka amin'ireo mpandahateny stereo hita eo amin'ny faran'ny takelaka, noho izany ny fananana faharatsiana kely na filalaovana horonantsary dia fanandramana tsotra izao.
Raha manampy an'io isika azonao atao ny mametraka ny Play StoreMiaraka kely aminay amin'ny alàlan'ny fampidinana APKs sy ny hafa dia azonao atao ny manana ny rindranasa rehetra izay tsy ananan'ny magazain'i Amazon ho an'ny fampiharana sy lalao video, iray hafa amin'ny kileman-tanan'ity takelaka ity. Mazava ho azy, raha mitady fampiharana sy lalao karama ianao dia ny Underground no fomba tsara indrindra idirana azy.
Tsarovy fa manana ny kinova 16GB ianao amin'ny € 109,99 sy ny 32GB amin'ny € 129,99. Raha mitady takelaka homena ny fianakaviana amin'ity Krismasy ity ianao amin'ny vidiny mora dia tsy misy safidy tsara kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fihetseham-po voalohany amin'ny Amazon Fire HD 8
Acer dia nandefa Chromebook 15 "$ 199 fotsiny